Aksaf Power : Mamokatra herinaratra 60 MW -
AccueilRaharaham-pirenenaAksaf Power : Mamokatra herinaratra 60 MW
08/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tanteraka ny fanamby. Notokanana omaly, teny amin’ny ivon-toeram-pamokarana herinaratra Ambohimanambola, ny foibem-pamokarana iray avy amin’ny orinasa Tiorka Aksaf Power. Tonga nanome voninahitra ny lanonana sy nitokana izany tetikasa goavana eo amin’ny famokarana herinaratra izany ny Filoham-pirenena mivady notrononin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta notarihin’ny praiminisitra sy ireo olo-manan-kaja maro.
Noho izany, ankoatra ny famokaran’ny orinasa Symbion Power, izay mamokatra 40 MW eny Mandroseza, mamokatra 60 MW kosa ny Aksaf Power eny Ambohimanambola. Araka izany, mitombo hatrany ny famokarana herinaratra ho an’ny tambazotra mifandrohy eto Antananarivo sy ny manodidina.
Nambaran’ny minisitry ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo (MEEH), Lantoniaina Rasoloelison, fa tontosa ary tanteraka ny fanamby izay napetraky ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny famatsiana herinaratra. Voalaza fa mitombo ny famokarana herinaratra, ary mitombo ihany koa ny tolotra omen’ny orinasa Jirama ho an’ny mpanjifa.
Raha ny voalaza hatrany, foibe-pamokarana herinaratra mandeha sy mampiasa menaka mavesatra ity an’ny orinasa Aksaf Power ity. “Tanjona ny tsy hampiasana intsony gazoala izay lafo vidy kokoa. Zava-dehibe izany satria mampihena ny fandaniana ataon’ny orinasa Jirama eo amin’ny famokarana izany”, hoy ny minisitry ny MEEH.
Voalaza ihany koa fa mbola mivarotra amin’ny fatiantoka ny orinasa Jirama amin’izao fotoana izao , ka anisany tombony lehibe hoenti-manentsina ny banga ny fampihenana ny fandaniana amin’ny fampiasana menaka mavesatra.
Ankoatra izay, tafiditra indrindra amin’ny politikan’ny angovo ny firosoana amin’ny politikan’ny angovo azo havaozina, izay ananan’i Madagasikara betsaka. Nambaran’ny minisitra hatrany mantsy fa raha ny fanadihadiana natao, dia mahatratra 2 000 ireo toerana afaka hitrandrahana angovo amin’ny renirano manerana ny Nosy, ary azo hamokarana herinaratra hatramin’ny 7 800 MW ireo toerana ireo. Saingy, ny 200 MW ihany no mbola voatrandraka amin’izao fotoana izao. Izay indrindra no mahatonga ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny MEEH miantso ireo mpampiasa vola mba hiditra amin’ny sehatry ny famokarana angovo.
Nisy ny fihaonan’ny avy amin’ny antoko HVM ao Frantsa tamin’ireo teratany malagasy monina sy mipetraka any an-toerana, ny sabotsy 3 marsa lasa teo. Tamin’izany indrindra no namelabelaran’ny avy amin’ny HVM Frantsa ny zava-bitan’ny Filoham-pirenena Hery ...Tohiny